2020 Umdlalo we-Ryder Cup
Umdlalo we-2020 we- Ryder Cup ngumdlalo we-43 webhola, kunye ne-Team USA ethatha iqela laseYurophu. I-Cup ye-Ryder idlala yonke iminyaka emibini ngamacandelo eengcali zegalufu zengcali ezimele iYurophu kunye ne-United States.
Imihla: Imihla ecacileyo yi-TBA, kodwa i-Cup ye-Ryder iyenzeka ngoSeptemba okanye ngo-Oktobha.
Indawo: I-Whistling Straits e-Kohler, i-Wisconsin
Iiphathimandla: I-TBA - iinqununu zivakaliswa zingakapheli iinyanga ezimbalwa zokugqitywa kweNdebe ye-Ryder yangaphambili.
Iikitikiti: Ulwazi lweTikiti luya kufumaneka ngexesha elithile kwiinyanga ezilandelayo kumqhubi we-2018. Gcina iso kwi-RyderCup.com ukuze uhlaziywe.
I-2020 ye-Ryder Cup yeGolf Golf Course
I-Whistling Straits yi-Wisconsin ye-faux-links course ebenxweme yaseLake Michigan eyayivulela ukuvakalisa kakhulu ngo-1998. Yenzelwe nguPete Dye, kwaye phantse xa ivulekile yaqala ukufumana izibophelelo zokubambisana kunye nezinye iziganeko ezinkulu.
I-Straight Straits iye yindawo yezikhulu eziphezulu; Nazi ezo ziganeko, kunye nabaphumeleleyo:
2015 I-PGA yoLutsha : Usuku lweJason
Umdlalo wePGA we-2010 : uMartin Kaymer
I-Open Senior Sundowns ka-2007: UBrad Bryant
2004 I-PGA Championship: Vijay Singh
2020 I-Ryder Cup ifomathi
Ifomati ye-Cup ye-Ryder iya njengale:
Umhla woku-1: Imifuno emine emine, iimidlalo ezine ezinebhola (umyalelo owenziwe ngumphathi wamagosa)
Umhla wesi-2: ezine ezine-amane, ezine ezinebhola
Umhla wesi-3: Imigangatho yeshumi elinesibini
Jonga i-FAQ, " Yintoni i fomati ye-Cup ye-Ryder?
"ukwenzela iinkcukacha ezongezelelweyo malunga neshedyuli yokudlala.
Ukukhethwa kweqela kwi-2020 ye-Ryder Cup
Iqela le-USA kunye neQela laseYurophu liya kukhetha i-squads yamadoda angama-12, kwicala ngalinye lidibanisa ukhetho oluzenzekelayo ngamaphuzu amanani kunye nekhefu zamagosa. Bona i-FAQ yethu, " Abadlali abakhethiweyo kwi-Cup ye-Ryder? " Malunga neenkcukacha zenkqubo yokukhethwa kwamanje.
Ngomdlalo we-2016 we-Ryder Cup, iqela lase-USA lanyula i-golfers ezisibhozo ngokukhetha ngokuzenzekelayo kunye nezine ezikhethiweyo zamagosa. Iqela leYurophu likhethile abadlali abathathu begolfu ngokusebenzisa uluhlu lwamaphuzu kunye neentlanzi ezintathu zegolfu ngokusebenzisa i-wildcard picks Kufikelela kwi-PGA yaseMelika kwiqela le-USA kunye neTurophu yaseYurophu yeQela laseYurophu ukubeka izikhokelo zabo zokukhetha, nangona kunjalo, ezo zinto zingatshintsha ngaphambi kowe-2020.
Okungakumbi Ngomdlalo weRyder Cup
Umlando weNdebe ye-Ryder : Nantsi ukujonga indlela ukhuphiswano oluqalise ngayo, kwaye luye lwaphuhliswa njani kwaye lushintsha kwimbali yayo ende.
Yonke i-Pick yeCape Captain's Pick kunye neeRekhodi zazo : Iipokethi ze-Captain (aka wildcards) ngamanye amaxesha ziphikisana kwaye ngamanye amaxesha zinokubaluleka. Nantsi ingqungquthela ye-golfer eye yaba yi-wildcard kunye neirekhodi zazo.
Izikolo eziPhambili ze-Art e-United States
Isifo seSigxina seMithi esiThiweyo - Ukukhusela nokuLawula
Izinzuzo ze-Aluminium Recycling